Mariela Carril | | အမေရိကတိုက်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
အမေရိကသည်ကမ္ဘာအဆုံးမှအဆုံးသို့သွားသောအလွန်ကြီးမားသောတိုက်ကြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများစွာရှိသည်၊ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဗဟိုပြုသည့်ဗဟိုတွင်အဓိကထားကြသည် ဗဟို.
အမေရိကအလယ်ပိုင်းအတိအကျဖြစ်သည် မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကအကြား ၎င်းကိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ကာရေဘီယံပင်လယ်တို့ဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။ ဒီကနေ့အမေရိကအလယ်ပိုင်းတွင်မည်သည့်နိုင်ငံများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ရလိမ့်မည်။ သေးငယ်သော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးကမ်းလှမ်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိလိမ့်မည် ခရီးသွားအံ့ဖွယ်အမှုများ
ဥရောပသားများရောက်ရှိချိန်တွင်ဤအမေရိက၏ဤအပိုင်းသည်ပြီးသားဖြစ်သည် အလွန်လူ ဦး ရေ တိုက်ကြီး၏တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းအစွန်းထက်ပိုသေချာ။ Bering ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ပြီးအမေရိကသို့လူ့နေရာရောက်ရှိလာသည့်အချိန်ကတည်းကယဉ်ကျေးမှုများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အားလုံးယဉ်ကျေးမှုများထဲမှsurelyကန်အမှန်အထင်ရှားဆုံးသောဖြစ်ခဲ့သည် မာယာနှင့်အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏။
ပထဝီနိုင်ငံရေးအရအလယ်ပိုင်းအမေရိကကိုနိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံခွဲထားသည်။ နီကာရာဂွာ၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ ကော့စတာရီကာ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်ပနားမားတို့ဖြစ်သည်။ ၁၈၂၁ တွင်လွတ်လပ်ရေးဖြစ်ထွန်းမှုများမစခင်အထိထိုဒေသသည်စပိန်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၈၂၃ တွင်အမေရိကအလယ်ပိုင်း၏ယူနိုက်တက်ပြည်နယ်များတည်ရှိသည်။ ဒေသ၏နိုင်ငံရေးသမိုင်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ နယ်နိမိတ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှု.
ပထဝီအနေအထားအရပြောရလျှင်အမေရိကအလယ်ပိုင်း Tehuantepec ၏ Isthmus မှပနားမား Isthmus အထိတိုးချဲ့သည်။ ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းသောနိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံအပြင်မက္ကဆီကန်ပြည်နယ် ၅ ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်တိုက်ကြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် Insular အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ တောင်စောင်းနှင့်မြောက်ဘက်ရှိတောင်များနှင့်လည်းချိတ်ဆက်တည်ရှိပြီးမတ်စောက်သောတောင်တန်းများရှိသည် မီးတောင်အများအပြားအချို့မှာပိတ်ထားသော်လည်းပစိဖိတ်ကမ်းခြေရှိများသောအားဖြင့်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။
ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာရဲ့ရာသီဥတုကကော။ ဟုတ်တယ် အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတု ထို့ကြောင့်နေ့နှင့်ညအကြားလှို့လှိုင်းများသည်ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းအပူရှိန်ကြောင့်၎င်းသည်ပြည့်နှက်နေပြီးအလွန်ကြွယ်ဝသောသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးတောင်ဘက်မှအနည်းငယ်နှင့်မြောက်ပိုင်းမှအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အမေရိကအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးသည်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများဖြစ်ကြသည်, သို့သော်ဖြစ်ကောင်းအချို့အချို့သောမျိုးစိတ်အခြားသူများထက်ပိုမိုတိကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ်သစ်တောများသည်လှပပြီးတူညီသောသန္တာကျောက်တန်း၊ နီကာရာဂွာ၏ရေသည်အဏ္ဏဝါမျိုးစိတ်များပေါများပြီးအယ်လ်ဆာဗေးဒေါသို့မဟုတ်ဂွာတီမာလာတွင်ထူးခြားသောငှက်များရှိသည်။ ကံကောင်းတာကareaရိယာ အများအပြားကာကွယ်ထားဒေသများရှိပါတယ်.
theရိယာတစ်ခုလုံးသည်သဘာဝအလှအပများဖြစ်သော်လည်း ပိုပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းအာရုံစူးစိုက်သောနိုင်ငံများရှိပါသည် အခြားသူများ။ ဥပမာ, ကော့စတာရီကာ၊ ပနားမားနှင့်ဂွာတီမာလာတစ် ဦး လည်ပတ်မှု၏ ဦး ခေါင်းမှာရှိပါတယ်။ ကော့စတာရီကာသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအများဆုံးရရှိသော်လည်းပနားမားသည်သူတို့၏လည်ပတ်မှုများမှအများဆုံးရရှိသောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် visitors ည့်သည်များသည်အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ စပိန်နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများမှဖြစ်သည်။ တောင်အမေရိကမှလူများလာရောက်လည်ပတ်မှုသည်မနည်းပါ။
အဘယ်အရာကို ခရီးသွားလုပ်ငန်း သူတို့ကအမေရိကအလယ်ပိုင်းကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီနိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံမှာလာစောင့်နေတာလား။ On ပနားမား ကြယ်က ပနားမားတူးမြောင်း, အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နှင့်အခွန်မပါဘဲစျေးဝယ်ဖို့နေရာတစ်ခုအဖြစ်။ သို့သော်လည်း၎င်းသည်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများပြားစွာရှိပြီးကမ်းရိုးတန်းနှစ်ခုလုံးအကြားကောင်းစွာသွားလာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်းစု Boca del Toro လှတယ်၊ တူညီတယ် san Blas၎င်း၏အဖြူကမ်းခြေကျော်ကြား။ လင်းပိုင်နှင့်တောင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်းရှိသည်။ မှုတ် ဒါကအကောင်းဆုံး ဦး တည်ရာဖြစ်တယ်
ပစိဖိတ်ဘက်မှာရှိတယ် ဝေလငါးကြည့်နေတာဇူလိုင်လနှင့်အောက်တိုဘာလအကြား။ The Coiba အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့်အဏ္ဏဝါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ၎င်းသည်ကြီးမားပြီးခမ်းနားထည်ဝါသောအရံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာလည်းရှိပါတယ် Zapatilla Cayအတွင်း Isla Bastimentos အမျိုးသားအဏ္ဏဝါပန်းခြံ.
ကော့စတာရီကာ ၎င်းသည်ကျဉ်းမြောင်းပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများအများဆုံးနှင့်တိုင်းပြည်ဖြစ်ခြင်းကိုဂုဏ်တင်သည်။ တောင်တန်းတွေကများပြားလှတဲ့အပြင်လိုအလှအပတွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ် Monteverde တိမ်တိုက်သစ်တောအဆိုပါ Torturego ၏တူးမြောင်းများ, အ လိပ်ကျွန်း ယင်း၏စိမ်းရေကမ်းခြေနှင့်တကွ, Chirripóအမျိုးသားဥယျာဉ်, သူ ကိုကိုစ်ကျွန်းအမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့်ပိုပြီးအဖြူကမ်းခြေအဘို့ Manuel Antonio အမျိုးသားဥယျာဉ်.
မီးတောင်များနှင့်ဖူမာရိုးလ်များအကြားတောင်တက်ရန်အတွက် Rincon de la Vieja အမျိုးသားဥယျာဉ် သို့မဟုတ် Tenorio မီးတောင်၏။
နှင့်သင်တန်း၏ Corcovado အမျိုးသားဥယျာဉ်. နီကာရာဂွာ ၎င်းသည်ကျွန်းဆွယ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိပြီးမီးတောင်များနှင့်အပူပိုင်းဒေသဘဝများစွာရှိသည်။ ကိုလိုနီအတိတ်ကိုသိရန်မှာ လီယွန်မြို့သည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် o Granadaကမ်းခြေများနှင့်စိမ်းပင်လယ်များအတွက် ပြောင်းဖူးကျွန်းကော်ဖီနှင့်၎င်း၏သမိုင်းအဘို့ Matagalpaကျွန်းများအကြားသွားလာရန် Solentiname ကျွန်းစုမီးတောင်များအတွက် မဆာရာမီးတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်, Cerro Negro မီးတောင်သို့မဟုတ်Cosigüinaမီးတောင်။
ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၎င်းသည်အမေရိကအလယ်ပိုင်း၏မြောက်ဘက်ဆီသို့ ဦး တည်သည်။ ၎င်းတွင်တောင်များနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများ၊ အားကြီးသောမြစ်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များအများအပြားရှိသည်။ ၎င်း၏သော့သည်အခြားကမ္ဘာမှဖြစ်သည် ညစ်ပတ်ပေရေ နှင့်၎င်း၏သန္တာကျောက်တန်း, ဒါမှမဟုတ် Roatan ပင်လယ်အော်ကျွန်းများ သူတို့တစ်တွေကျက်သရေရှိပါတယ်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် Copan လမ်းကြောင်း Maya အပျက်အယွင်းများသို့မဟုတ် ilatila အတွက်ရေငုပ်အတူ။ မင်းကိုလိုနီခေတ်အတိတ်ကိုကြည့် Trujillo, Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, San Pedro က de Zapaca သို့မဟုတ် San Pedro de Sula ။
အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ ၎င်းသည်သေးငယ်ပြီးလူ ဦး ရေထူထပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ Is မီးတောင်မြေ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကိုလိုနီခေတ်မှအရည်ပျော်နေသောနေရာကိုမြင်တွေ့ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ Santa Ana တွင် Gothic style ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိသည်၊ La Joya de Cerénတွင် Maya ၏ခြေရာကိုသင်တွေ့ရပြီး Panchimalco တွင်ကိုလိုနီဝါဒကိုသင်တွေ့ရသည်။ ရှုခင်းများကိုခံစားရန် Cerro Verde အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် မီးတောင်အမျိုးသားဥယျာဉ်Suchitlánရေကန်၊ Coatepeque ရေကန် ...
သငျသညျအပျက်အယွင်းများနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် San Andres ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာ၊ အိမ်ဖြူတော်နှင့် Tazumal ။ La ပန်းပွင့်လမ်းကြောင်း ဒါဟာအဆင်းလှသောအရာတစ်ခုခုသည် Apaneca-Ilamatepeq တောင်တန်းကိုဖြတ်ကူးတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဘာပါလိမ့် ဂွာတီမာလာ? ကောင်းပြီ၊ သမိုင်းကြောင်းများစွာ၊ မာယာနှင့်ကိုလိုနီနယ်မြေသည်အလွန်ကွဲပြားသော influ ဇာလွှမ်းမိုးမှုများရရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ဂွါဂွာတီမာလာ ၎င်းသည်လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Chichicastenango၎င်း၏ကြီးမားပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်သောစျေးကွက်ဖြင့်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်ပါသည်။ စပိန်မှတည်ဆောက်ခဲ့သော Castillo de San Felipe ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင် Mayan ယဉ်ကျေးမှုကိုနှစ်သက်လျှင်၊ Uaxactúnရှေးဟောင်းသုတေသနဥယျာဉ်၊ Iximche, Kaminal Juyú, Quiriguáရှေးဟောင်းသုတေသနပန်းခြံ, Tikal အမျိုးသားဥယျာဉ်အဆောက်အ ဦး ငါးထောင်ကျော်နှင့်အတူ Yaxháနှင့်Petén, ပိရမစ်များ၊
နောက်ဆုံးတော့ ဘေလီဇ်ကာရစ်ဘီယံကမ်းရိုးတန်းတွင်နေထိုင်သောလူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်မရောက်နိုင်သည့်နိုင်ငံငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေးပေမယ့် စူပါ biodiverseပင်လယ်ပြင်၌လည်းကောင်း၊ ကမ်းရိုးတန်းရှေ့တွင် ၄ ခုအနက် ၃ ခုရှိသည် သန္တာကျောက်တန်း အနောက်တိုင်း hemisphere အတွက်အရေးအပါဆုံး။ အကယ်၍ အခြားဗဟိုအမေရိကရှိအခြားနိုင်ငံများအားလုံးတွင်စပိန်ဘာသာရှိသည်ဆိုပါကဤနေရာ၌ဘီလီဇ်တွင်ဖြစ်သည် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းက။
ဘီလီဇ်တွင်ရှေးဟောင်းသုတေသနအပျက်အယွင်းများလည်းရှိသည်။ Altun Ha, ဘီလီဇ်စီးတီး, အလွန်နီးကပ် Caracol ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုက်အဆိုပါ Lamanai ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုက်တောတွင်းအလယ်၌ Xunantunich site, Mopánမြစ်ကမ်းပါးပေါ်မှာ။ ကမ်းခြေ၊ နေနှင့်စိမ်းပင်လယ်ဖြစ်သည် South Water Caye, Belic Barrier Reefအီး, ကျော်ကြား အပြာရောင်တွင်းရေငုပ်ရန်အတွက် San Herman ဂူသို့မဟုတ် Gladden Spit Marine Reserve နှင့် Silk Cays နှင့်သူတို့၏လှပသောဝေလငါးမန်းများနှင့်အတူ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာနှင့်သဘာဝပရိတ်သတ်များအတွက်၊ အလယ်ပိုင်းအမေရိကတွင်များစွာရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » အမေရိကအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများ
အဘယ်အရာကို Eguisheim, Alsace တွင်ကြည့်ရှုပါ